मिथक : भगवान् विष्णु र लक्ष्मी ४ महिनासम्म सुत्ने ‘क्षीर सागर’ कहाँ पर्छ ? – Patrika Nepal
मंग्सिर १४, २०७८ मंगलबार 44
विष्णु पुराणका अनुसार भगवान् विष्णु र उनकी पत्नी सुत्ने सागरलाई क्षीर सागर भनिन्छ । क्षीर अर्थात दूधको सागर के हो ? त्यो कहाँ थियो वा छ ? के यो सत्य हो वा कुनै मिथ मात्र हो ? यस्ता अनेक जिज्ञासा तपाईंको मनमा पनि उत्पन्न भयो होला ।
सप्तद्वीप : जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलद्वीप, कुशद्वीप, क्रौन्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप ।सप्तसागर : खाराजल, इक्षुरस, मदिराजल, घृतसागर, दधिसागर, क्षीरसागर, मधुजल ।सप्तपाताल : अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल, पाताल ।
Prevबिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ? जान्नुहोस् र जाने पछि गर्नुहोस्
Nextभुपेन्द्र बडुवालको घ”टना न सेलाउदै फेरी घ”ट्यो मोरङमा आङ जिरिङ्ग पार्ने ड”रलाग्दो घ”टना